Waxgaradka iyo Shacabka Sool Oo Shaaciyey Dagaal Ka Dhan ah Somaliland | Allbanaadir News
Waxgaradka iyo Shacabka Sool Oo Shaaciyey Dagaal Ka Dhan ah Somaliland
Boqolaal dadweyne ah oo iskugu jira Saraakiisha ciidamada, Isimadda dhaqanka, Waxgaradka, Dhalinyaradda & Haweenka magaalada Buuhoodle ee xarunta gobalka Cayn ayaa kaqeybgalay soo dhaweynta Madaxweyne kuxigeenka dawladda Puntland Eng CabdiXakiim Cumar Camay oo maanta gaaray gudaha magaalada Buuhoodle.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng Camay ayaa la hadlay Boqolaal Shacab ah oo kusugnaa garoonka ciyaaraha ee magaalada Buuhoodle, wuxuuna u sheegay in ay dawladdiisa ka go`an tahay soo celinta dhulka Puntland,
Mr, Camey ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday dawladdooda, isla markaasna ay talaabadaas ka dambeysay Somaliland, balse ay si cad uga jawaabi doonaan, loogana baahan yahay shacabku in ay qeyb ka noqdaan.
Boqolaal qof oo madasha kusugnaa ayaa si rasmi ah uga jawaabay codka dawladda Puntland ee ah in lagu taageero dagaalkan, waxayna Shacabku balan qaaden in ay diyaar uyihiin dagaalka iyo garab istaaga ciidamada Difaaca.
Saraakiisha ciidamada Buuhoodle oo horey Somaliland dagaal ula galay sannadkii 2011-kii, gaar ahaana dagaalkii xasuusta lahaa ee KALSHAALE, ayaa si adag u taageeray howlgalkan, waxay banaanbaxa ka sheegeen in ay hubkooda ku jiidanayeen Somaliland oo ay markale isku arki doonaan jiidaha dagaalka.
Isimada qaarkood oo hadlay waxay bogaadiyeen talaabada dawladda Puntland, waxayna sheegeen in ay wax kasta ku taageerayaan dawladda, isla markaasna ay diyaar u yihiin xoreynta gobalka Sool, waxayna ugu yeereen Muuse Biixi in uu 24 saac gudahood la baxo maleeshiyaadiisa.
Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa ku dhawaaqay in Somaliland 24 saac gudahood ay uga baxaan dhulka Puntland ee ay joogaan.
Fariinta ka timi magaalada Buuhoodle ayaa ah mid la yaab leh, marka la eego sidda ay hadda wax ku socdaan, waxaana muuqata in Madaxweyne kuxigeenka Puntland ku guuleystay safarkiisii Buuhoodle oo uu taageero uga raadinayey bulshada deegaanadaas, si loo soo celiyo deegaanada maqan ee gobalka Sool.
Daawo Mustafa Rasta oo china tagay oo dadki dhan ka yaabshay kadib marki oo tusay xoogiisa